Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » IMEX America: Dhacdada Diirada Cusub ee Shirkadaha
Qorsheeyayaasha shirkadu waxay hadda haystaan ​​fursado dheeri ah oo ay isku xiraan kuna wadaagaan waayo -aragnimada inta lagu guda jiro IMEX America bisha Nofembar. Laba dhacdo oo gaar ah ayaa lagu qaban doonaa bandhigga kaas oo ka dhici doona Nofeembar 9-11 Las Vegas.
Sannadkan cusub ayaa ah Focus Corporate, oo u furan qorsheeyeyaasha shirkadaha heerar kasta.
Waxay dhici doontaa Isniinta Smart, oo ay ku shaqeyneyso MPI, Noofambar 8, 2021.
Kalfadhiyadu waxay awood u siin doonaan in si qoto dheer looga doodo arrimaha taagan iyo caqabadaha jira sida maamulka kooxda, naqshadaynta kulanka, isgaarsiinta wax ku oolka ah ee shaqaalaha fog, iyo caafimaadka maskaxda iyo fayoobaanta.
Madasha Kulanka Fulinta waa shir casuumaad kaliya loogu talagalay madaxda sare ee shirkadaha sare ee shirkadaha Fortune 2000 iyo-cusub sanadkaan-waa Diirada Shirkadda, u furan qorsheeyayaasha shirkadaha heer walba. Qabashada Maalinta Isniinta ee Smart, oo ay ku shaqeyneyso MPI, 8-da Noofembar labada kalfadhiba waxay awood u siin doonaan in si qoto-dheer looga doodo arrimaha hadda jira iyo caqabadaha sida maaraynta kooxda, qaabeynta kulanka, xiriir wax ku ool ah oo lala yeesho shaqaalaha fog, iyo caafimaadka maskaxda iyo fayoobaanta.
Rugcadaaga warshadaha shirarka iyo fududeeyaha xirfadda leh Terri Breining ayaa hogaamin doona Madasha Kulanka Fulinta iyo Annette Gregg, Madaxweyne Ku Xigeenka Sare, Khibrada MPI ayaa hogaamin doonta Diirada Cusub ee Shirkadaha. Qaabka labada kalfadhiba wuxuu ku wajahan yahay barashada bulshada, ku dhiirrigeliya ka -qaybgalayaashu inay wadaagaan oo ay is -weydaarsadaan fikradaha jawi aan rasmi ahayn oo haddana khaas ah.
Carina Bauer, oo ah Maamulaha Kooxda IMEX, ayaa sharraxaysa: “In kasta oo qaybta dhacdooyinka meheraddu ay tahay hal beel oo dhan, baahiyaha kooxaha gaarka ah ee ka dhex jira beeshan waa kuwo aad u kala duwan oo qorsheeyayaasha shirkadu ma aha kuwo ka reeban.
“Waxaan ballaariney wax -bixinnadeenna qorsheeyeyaasha shirkadaha sannadkan markii aan bilownay Focus Corporate oo ay weheliyaan Madasha Kulanka Fulinta. Labada kalfadhiba waxay leeyihiin wadashaqeyn wadnahooda, iyagoo siinaya fursad ay ku wadaagaan aragtiyaha isla markaana ay ku xalliyaan dhibaatooyinka xirfadleyda iyo asaagga shirkadaha adduunka oo dhan. ”
The Inspiration Hub, oo hoy u ah waxbarashada sagxadda bandhigga, ayaa sii wadata wada hadalka qorsheeyaha shirkadda inta lagu jiro bandhigga oo leh kulan waxbarasho: Wadahadal shirkadeed: Soo kabasho ulajeed leh oo ka mid ah warshadaha dhacdooyinka. Bob Bejan, Madaxweyne Ku -xigeenka Shirkadaha, Dhacdooyinka Caalamiga ah, Studio -yada Wax -soo -saarka & Bulshada Suuqgeynta, Microsoft iyo Nicola Kastner, VP, Madaxa Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Dhacdada ee SAP ayaa la wadaagi doona waaya -aragnimadooda ku -tallaabidda dhacdooyinka dhijitaalka iyo jirka, go'aamada iyo adeegsiga shirarka isku -dhafan. , filashooyinka iyo baahiyaha la beddelay ee ka -qaybgalayaasha dhacdada iyo saamaynta ay leedahay naqshadeynta dhacdada.
Iibsadayaasha shirkadu waxay ka yihiin 22 boqolkiiba 3,000 oo iibsade oo hadda u diiwaangashan inay ka soo qeyb galaan IMEX Ameerika.
Madasha Kulanka Fulinta waa casuumaad-kaliya madaxda sare ee shirkadaha sare ee shirkadaha Fortune 2000. Diirada Shirkadda wuxuu u furan yahay qorsheeyayaasha shirkadaha heer kasta. Labaduba waxay ka dhacaan IMEX America maalinta Isniinta ee Smart oo ay ku shaqayso MPI, markay tahay 8 Noofembar.
IMEX America waxay ka dhacdaa 9 - 11 Noofambar Mandalay Bay ee Las Vegas. Si aad isu diiwaangeliso - bilaash - guji halkan.